Trano fandraisam-bahiny - Baobab Tree Hotel & Spa
Mandray soa avy amin’ireo tolotra fanombohana, amin’ny toerana azo antoka, angamba hotely tsara tarehy eto Madagasikara, marika vaovao, miaraka amina tokantrano amin’ny sisiny ny canal ny mozambika manome anao ny tsara indrindra amin’ny nosy lehibe.
Fantaro ny hotely Baobab Tree & Spa Majunga, hotely « mythique » sy « majestueux » any amin’ny morontsiraka andrefan’i Madagasikara izay manolotra sarina tsy manan-tsahala sy akaiky ny toerana tsy hay hadinoina hitsidika azy. Ny hakanton’ilay Nosy mena dia atolotra anao any Mahajanga ary ianao dia hipetraka tsara ao amin’io trano 4 metatra io miaraka amin’ny Spa. Ny Hotel & Spa vaovao miaraka amina famolavolana maoderina miaraka amina haingo rafitra ho an’ny fampiononana 4 kintana.
Toerana tsy manam-paharoa sy miavaka, tsara indrindra amin’ny fialan-tsasatra miaraka amin’ny fianakaviana, fitsangantsanganana ara-barotra, hetsika, fihaonambe, vody ondry ary fampakaram-bady.Miorina eo amin’ny lampihazo miaraka amin’ny fomba fijery mahavariana ao amin’ny onjampeo Betsiboka. Ny trano 52 dia ahitana 4 sivily, trano fisakafoanana sy efitra fisakafoana, fanalana hetaheta, baranjely amerikana, trano fisakafoanana, fivarotana entana, spa, toerana fanatanjahan-tena, kianja filalaovana ankizy, mini club, torapasika manokana, kianja torapasika fanaovana volley, dobo filomanosana anaty, dobo ivelany, fivarotana, sampan-draharaham-pitaterana anatiny, « services navettes aéroport », 4 × 4 fiara miaraka amin’ny mpamily, fitsangatsanganana sy manodidina ny tanàna, sns.